Ukudakumba ebantwaneni nakwishumi elivisayo | Bezzia
UMaria Jose Roldan | 14/01/2022 22:34 | Fundisa abantwana
Kuhlala kukho imfihlo enkulu malunga nayo yonke into enento yokwenza nempilo yengqondo. Nangona isekude indlela ekufuneka ihanjwe, kwiminyaka yakutshanje kuye kwakho ukubonakala okukhulu malunga nokuphazamiseka kwengqondo. Ukudakumba yeyona ngxaki yengqondo ixhaphakileyo kwihlabathi kwaye kucingelwa ukuba bangaphezulu kwezigidi ezingama-300 abantu abaphethwe yiyo kwihlabathi jikelele.
Esi sifo asichaphazeli abantu abadala kuphela, ukusukela kwiminyaka yakutshanje iimeko zabantwana kunye nolutsha olunoxinzelelo ziye zanda kakhulu.
1 Ngaba ukudandatheka kunokubachaphazela abantwana nabafikisayo?
2 Iimpawu zokudakumba kubantwana nakwishumi elivisayo
3 Yintoni abafanele bayenze abazali xa bephawula ukuba abantwana babo basenokudandatheka
Ngaba ukudandatheka kunokubachaphazela abantwana nabafikisayo?
Ngokufika kobhubhane, inani leengxaki zoxinzelelo liye landa, ngakumbi kubantwana nakwishumi elivisayo. Kwimeko yezizathu, kufuneka kuqatshelwe ukuba i-genetic aspect idlala indima ebaluleke kakhulu. Umntwana onomzali oye wadandatheka, Inamathuba amaninzi okuyiphuhlisa kwixesha elizayo. Ngaphandle koku, iimeko ezimanyumnyezi ezinjengokufa komntu esimthandayo okanye ukwahlukana kwabazali zinokubangela umntwana okanye ofikisayo adandatheke.
Iimpawu zokudakumba kubantwana nakwishumi elivisayo
Olunye lweempawu ezicacileyo zokuba umntwana usenokuba noxinzelelo kubuntu bakhe obucatshukiswayo kunye nokuziphatha kwakhe ngomsindo. Umntwana ucaphuka ngayo yonke into kunye neentyantyambo ekukhanyeni kwemini.
Umntwana odandathekileyo uya kulila ngokulula kwaye udakumbile kwaye akanamdla ngamaxesha onke.
Ukuba nokuzithemba okuphantsi kwaye uzive unetyala ngayo nantoni na.
Kukho ukuhoxiswa kwimeko yentlalo kunye bakhetha ukuzahlula kubahlobo nakwintsapho.
Inkqubo yesikolo ayikho ncam ngenxa yokunqongophala okubalulekileyo kwenkuthazo.
Umntwana unzima kakhulu xa elala kwaye oku kuguqulela ukukhathala kunye ekusweleni amandla okubalelwa.
Kukho iingxaki ezinzulu ngokutya, ukuza kuba neengxaki ezinokubakho ezinxulumene nokutya.
Kwiimeko ezinzima kakhulu, umntwana usenokuba neengcinga ezithile zokuzibulala.
Yintoni abafanele bayenze abazali xa bephawula ukuba abantwana babo basenokudandatheka
Ukuba abazali babona nayiphi na kwezi mpawu zichazwe ngasentla, Kubalulekile ukuya kugqirha wabantwana ukuze ufumane unyango lwengxaki enjalo. Kukwacetyiswa ukuba kubekwe iliso kubantwana kwaye kubathintele ekubeni bachithe ixesha elininzi phambi kwezikrini. Ayisiyonto ingaphaya kwamandla, ukucebisa ukuba umntwana enze umdlalo othile kuba indlela yokuphila yokuhlala ihlala isemva kweemeko ezininzi zokudakumba ebantwaneni nakwishumi elivisayo.
Kwakhona abazali kufuneka babe noxanduva lokuseka uluhlu lwemikhwa esempilweni ekhaya enceda abantwana baphile ubomi obusempilweni kangangoko. Le mikhwa ingundoqo xa kufikwa kubantwana ukuba bakwazi ukutya ngcono kakhulu kwaye ukulala iiyure ezifunwa ngumzimba.
Ngamafutshane, ukudakumba yingxaki enkulu echaphazela indawo enkulu yoluntu. Idatha iyingozi ngokwenene kwaye baninzi abantwana nabafikisayo namhlanje ababuphelisayo ubomi babo ngenxa yokudandatheka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Fundisa abantwana » ukudakumba ebantwaneni nabakwishumi elivisayo
Indlela yokuchonga i-bipolar disorder